डा. केसीको समर्थनमा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक – Fewa Times
डा. केसीको समर्थनमा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक
प्रकाशित मिति: November 10, 2019 3:10 pm
डडेल्धुरा – डडेल्धुरामा आइतबार प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा सरकारी सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।
यस्तै उक्त सङ्घको नेतृत्वमा आज दिउँसोदेखि अपरान्हसम्म सदरमुकाम बागबजार क्षेत्रका पसल बन्द गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । डडेल्धुरा अस्पतालमा सत्याग्रहमा रहेका डा।केसीको समर्थनमा जिल्लामा दैनिक विभिन्न कार्यक्रम हुँदै आएका छन् ।